ချစ်ရေးချစ်ရာတစ်ခုမှာလိင်မှုကိစ္စတွေကလည်းထိုက်သင့်သလောက်အရေးပါတယ်ဆိုတာ… – Trend.com.mm
Posted on October 7, 2018 May 10, 2019 by Shun Lei Phyo
လိင်ဆက်ဆံပြီးချိန်(သို့)တစ်ကိုယ်တော်အာသာဖြေချိန်မှာ ပြီးမြောက်သွားပြီးကျေနပ်အားရမှုရှိသွားဖို့ကိုဆက်ဆံသူတိုင်းလိုချင်ကြပါတယ်။ ဒီလိုစိတ်ကျေနပ်အားရခြင်းနဲ့အတူပြီးမြောက်သွားခြင်းကြောင့် ဒီလိုကောင်းကျိုးသုခတွေလည်းရနိုင်တယ်ဆိုတာကို သိထားသင့်ပါတယ်…
ကျေနပ်အားရမှုရှိစွာ ကာမဆန္ဒပြည့်ဝသွားတဲ့အခါ အမျိုးသားပဲဖြစ်ဖြစ် အမျိုးသမီးပဲဖြစ်ဖြစ် စိတ်ဖိစီးမှုကို ပိုလို့လျော့ချနိုင်သွားတာမယုံမရှိပါနဲ့။
2. အသားရည်ကိုပိုလို့ ကောင်းလာစေတယ်
အသားရည်ကနဂိုထက်ပိုလို့နုပျိုလာစေပြီး အရေပြားပေါ်ကပျက်စီးမှုတွေဟာ အသစ်တစ်ဖန်ပြန်လည် ကောင်းမွန်လာစေပါတယ်။ Stress Hormones တွေကိုလျော့ချပေးတဲ့အပြင်အသားရည်ကို ပိုလိုစိုပြေလာစေပါတယ်။
ဆန္ဒမပြည့်ဝပဲ အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့်ရပ်တန့်လိုက်ရချိန်မှာ ခေါင်းကိုက်ပြီးကျန်ခဲ့တာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ ဒါပင်မဲ့ ဆန္ဒပြည့်ဝစွာပြီးဆုံးသွားရင်တော့ ခေါင်းကိုက်ခေါင်းမူးကိစ္စတွေမခံစားရပဲ ခေါင်းကြည်ပေါ့ပါးစေပါတယ်။
Orgasm ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာ ပုံမှန်ထက်ကောင်းကောင်းပိုပြီး အိပ်ပျော်စေပါတယ်။ လန့်နိုးတာဘာညာမရှိပဲ အိပ်ကောင်းခြင်းနဲ့ စိတ်လက်ပေါ့ပါးစွာ အိပ်ပျော်သွားတာမျိုးပါ။
လိင်ဆက်ဆံခြင်းဟာ ကိုယ်အလေးချိန်ကို လျော့ချပေးနိုင်တာအမှန်ပါပဲ။ လိင်ဆက်ဆံတဲ့အဆင့်မဟုတ်သေးပဲ Kiss ရုံလေးKiss ရင်တောင် ဟော်မုန်းတွေကြောင့် လက်ရှိထက်ပိုပြီး ၀ိတ်အနည်းငယ်ကျစေတာကို ဆေးဖက်ဆိုင်ရာပညာရှင်တွေရဲ့လေ့လာစမ်းသပ်ချက်အရအတိအလင်းတွေ့ရှိရပါတယ်။
လိင်ဆက်ဆံခြင်းက ချစ်ခြင်းတွေကိုပိုမိုတိုးပွားစေတဲ့အရာတစ်ခုဆိုလည်းမမှားပါဘူး။ ချစ်လို့ဖြစ်လာတဲ့လိင်ဆက်ဆံခြင်းဟာ အချစ်တွေကိုပိုပြီးတိုးပွားလာစေနိုင်တာ၊ နှစ်ဦးသားဆက်ဆံရေးပိုမိုပွင့်လင်းလာစေနိုင်တာမလို့ အချစ်ရေးတစ်ခုမှလိုအပ်သင့်သလောက်တော့လိုအပ်ပါတယ်။
လိငျဆကျဆံပွီးခြိနျ(သို့)တဈကိုယျတျောအာသာဖွခြေိနျမှာ ပွီးမွောကျသှားပွီးကနြေပျအားရမှုရှိသှားဖို့ကိုဆကျဆံသူတိုငျးလိုခငျြကွပါတယျ။ ဒီလိုစိတျကနြေပျအားရခွငျးနဲ့အတူပွီးမွောကျသှားခွငျးကွောငျ့ ဒီလိုကောငျးကြိုးသုခတှလေညျးရနိုငျတယျဆိုတာကို သိထားသငျ့ပါတယျ…
ကနြေပျအားရမှုရှိစှာ ကာမဆန်ဒပွညျ့ဝသှားတဲ့အခါ အမြိုးသားပဲဖွဈဖွဈ အမြိုးသမီးပဲဖွဈဖွဈ စိတျဖိစီးမှုကို ပိုလို့လြော့ခနြိုငျသှားတာမယုံမရှိပါနဲ့။
3. အသားရညျကိုပိုလို့ ကောငျးလာစတေယျ
အသားရညျကနဂိုထကျပိုလို့နုပြိုလာစပွေီး အရပွေားပျေါကပကျြစီးမှုတှဟော အသဈတဈဖနျပွနျလညျ ကောငျးမှနျလာစပေါတယျ။ Stress Hormones တှကေိုလြော့ခပြေးတဲ့အပွငျအသားရညျကို ပိုလိုစိုပွလောစပေါတယျ။
ဆန်ဒမပွညျ့ဝပဲ အကွောငျးတဈခုခုကွောငျ့ရပျတနျ့လိုကျရခြိနျမှာ ခေါငျးကိုကျပွီးကနျြခဲ့တာမြိုးဖွဈတတျတယျလို့သိရပါတယျ။ ဒါပငျမဲ့ ဆန်ဒပွညျ့ဝစှာပွီးဆုံးသှားရငျတော့ ခေါငျးကိုကျခေါငျးမူးကိစ်စတှမေခံစားရပဲ ခေါငျးကွညျပေါ့ပါးစပေါတယျ။
Orgasm ဖွဈသှားတဲ့အခြိနျမှာ ပုံမှနျထကျကောငျးကောငျးပိုပွီး အိပျပြျောစပေါတယျ။ လနျ့နိုးတာဘာညာမရှိပဲ အိပျကောငျးခွငျးနဲ့ စိတျလကျပေါ့ပါးစှာ အိပျပြျောသှားတာမြိုးပါ။
လိငျဆကျဆံခွငျးဟာ ကိုယျအလေးခြိနျကို လြော့ခပြေးနိုငျတာအမှနျပါပဲ။ လိငျဆကျဆံတဲ့အဆငျ့မဟုတျသေးပဲ Kiss ရုံလေးKiss ရငျတောငျ ဟျောမုနျးတှကွေောငျ့ လကျရှိထကျပိုပွီး ၀ိတျအနညျးငယျကစြတောကို ဆေးဖကျဆိုငျရာပညာရှငျတှရေဲ့လလေ့ာစမျးသပျခကျြအရအတိအလငျးတှရှေိ့ရပါတယျ။
လိငျဆကျဆံခွငျးက ခဈြခွငျးတှကေိုပိုမိုတိုးပှားစတေဲ့အရာတဈခုဆိုလညျးမမှားပါဘူး။ ခဈြလို့ဖွဈလာတဲ့လိငျဆကျဆံခွငျးဟာ အခဈြတှကေိုပိုပွီးတိုးပှားလာစနေိုငျတာ၊ နှဈဦးသားဆကျဆံရေးပိုမိုပှငျ့လငျးလာစနေိုငျတာမလို့ အခဈြရေးတဈခုမှလိုအပျသငျ့သလောကျတော့လိုအပျပါတယျ။